अपकृत्य - विकिपिडिया
अपकृत्य विधि }|}}
अवधारणा स्‍विकार गरिएको छैन
अध्‍ययन (नेपालमा सुरुआतकर्ता)
Rajendra Kuamr Acharya }
अपकृत्य “Tort” शब्दको नेपाली रूपान्तरण हो । यो शब्द Latin शब्द “TORTUM”बाट बनेको हो । फ्रेन्च भाषामा यसको अर्थ तोड मरोड गर्नु भन्ने हुन्छ । जसलाई दोष, दुष्कृति, अपकार भनेर बुझन सकिन्छ । दोषपूर्ण कार्यलाई फौजदारी अर्थात आपराधिक गल्ती र देवानी गल्तीको रूपमा विभाजन गर्न सकिन्छ । अपकृत्य देवानी गल्ती वर्गमा पर्दछ । अपकृत्यमा वादीलाई भएको क्षतिको लागि क्षतिपूर्ति तिर्न बाध्य पारिन्छ ।
२ अपकृत्य तत्‍वहरू
२.१ विधिक अपकृत्य र अपकृत्य विधका सामान्य सिद्धान्तको फरक
२.२ अपकृत्य र अपराधमा अन्तर
२.३ क्षतिपूर्ति र अपकृत्‍य
३ नेपालको अवस्था
३.१ नेपालमा अपकृत्‍य विधिको अध्‍ययन
३.३ External links
अपकृत्य विधिको मुख्य उद्देश्य पीडित व्यक्ति वा उसको आश्रित व्यक्ति वा परिवारलाई दोषकर्ताबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनु हो । क्षतिपूर्ति दिलाउने विभिन्न तरिकाहरू मध्ये कहिलेकाँही अनुकरणात्मक क्षतिपूर्ति दिलाएर दोषीलाई पुनः अपकार गर्नबाट रोक्ने उद्देश्य पनि राखिन्छ । देवानी क्षति भनेर दावी गरिएको अवस्थामा यदि क्षतिपूर्तिको कारवाही स्वीकार योग्य छैन भने त्यसलाई अपकृत्य भनिँदैन । अपकृत्य हुनको लागि अनिर्धारित क्षतिपूर्तिको विषय हुनु अनिवार्य रहन्छ । अन्य कुनै कानुन, सम्झौता आदिबाट कुनै पनि प्रकारको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने रहेछ भने त्यो अपकृत्य विधिको क्षेत्र भित्र पर्दैन ।
अपकृत्य कानूनले अर्काको अधिकारलाई सम्मान गर्ने हुदाँ यसले व्यक्तिलाई अनुशासित एवं मर्यादित बनाउँछ । यसको पूर्ण परिपालनाबाट समाजमा हुने धेरै अपराधहरूमा नियन्त्रण हुन जान्छ ।
मानौं तपाईकी पत्नीलाई उपचारको लागि विर अस्पतालमा लैजानु भएकोमा डाक्टरको घोर उपेक्षाको कारण गलत उपचार भएबाट रोग निको हुनको सटटा बढदै गयो । त्यस पछि अन्य अस्पतालमा भर्ना गराएर समेत उपचार गराउनु भयो । तर ३ महिना लामो उपचारको क्रममा पत्नीको मृत्यु भयो । यसमा तपाईँले निम्न लिखित प्रकृतिको हिसाब जोडेर क्षतिपूर्ति दावी गर्न सक्नु हुन्छ:
३ महिनासम्म अस्पतालमा लागेको खर्च २ लाख रूपैया;
तपाईँले ३ महिनासम्म दौडधुप गर्नु भएको हुँदा त्यस अबधिमा तपाईँले आय आर्जन गर्न सक्नु भएन । त्यसैले तपाईँको मासिक आय १० हजार रूपैयाका दरले ३० हजार रूपैया;
तपाईँलाई पर्न गएको मानसिक तनाव, तपाईँको यौन जीवनमा पर्न गएको असर, तपाईँले पत्नीबाट प्राप्त गर्ने सहयोग आदिलाई रकममा परिणत गर्दा हुन आउने रकम रु. ५० हजार रूपैया (अन्दाजी);
त्यस अतिरिक्त मनासिव माफिकको अन्य रकम ।
अपकृत्य तत्‍वहरू[सम्पादन गर्ने]
कानुनविद राजेन्‍द्र कुमार आचार्यको पुस्‍तक दुष्कृति कानून अनुसार "अपकृत्य हुनको लागि दोषपूर्ण कृत्य हुन जरुरी छ । यस्ता कृत्यहरू सकारात्मक वा नकरात्मक दुवै प्रकारका हुन सक्छन । सामान्यत व्यक्ति आफूले गरेका सम्पूर्ण कृत्यहरूप्रति जवाफदेही हुनु पर्छ । तयस्ता कृत्यहरूबाट अरु कसैलाई असर पर्न गएमा यदि ति कृत्यहरूको न्यायौचित्य छैन भने आफू दायी हुनु पर्छ । तर मनुष्यको नियन्त्रण बाहिर रहेका कृत्यहरू प्रति भने दायी हुन पर्देन । जस्तो कि प्राकृतिक घटना, भुइचालो आउनु, चट्याङ पर्नु, बाढी, पहिरो, आएर क्षति पु¥याउनु आदि घटनाहरू जुन मनुष्यको नियन्त्रण बाहिर रहेका छन यस्तोमा मनुष्य उत्तरदायी हुन सक्दैन । र उत्तरदायी बनाउन पनि मिल्दैन र सकिदैन । त्यसैगरि मनुष्यको सोच, विचार मात्र जुन अन्यकोलागि हानी कारक हुन सक्दैन, हुदैन तथा त्यसलाई प्रमाणित गर्न पनि सकिदैन त्यसलाई पनि उत्तरदायी बनाइृदैन र बनाउन पनि सकिदैन । तसर्थ मनुष्यका तयस्ता कृत्यहरू जनु प्रमाणित गर्न वा अनुशासित गर्न सकिन्छ तथा जसबाट अर्को व्यक्तिलाई असर पर्न जान्छ भने तयस्तो अवस्थामा कनुष्यलाई आपूले गरेको कृत्यप्रति उत्तरदायी बनाइन्छ ।"
विधिक अपकृत्य र अपकृत्य विधका सामान्य सिद्धान्तको फरक[सम्पादन गर्ने]
कुन विषय कानूनी अपकृत्य हो र कुन सामान्य सिद्धान्त अन्तर्गत पर्ने हो भनेर छुटयाउनका लागि कुनै पनि अपकृत्यात्मक विषयलाई यदि कानुन बनाएर व्यवस्थित गरियो भने त्यो कानूनी अपकृत्य (Statutory Tort) हुन जान्छ । कानुन बनेको छैन तर हक अधिकारमा असर परेको र त्यसको उपचार प्राप्ति सम्भव छ भने त्यो सामान्य सिद्धान्त अन्तर्गतको अपकृत्य हो । आजभोलि विश्वका अधिकांश देशमा कानुन बनाएर अपकृत्यलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको पाइन्छ । केही नेपाली कानुनमा पनि क्षतिपूर्तिको कुरा राखिएको छ । नेपालको कानुनमा समेटिएका क्षतिपूर्तिका कतिपय प्रावधानहरू अपकृत्यविधिको अवधारणा अनुरूप नभै क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित देखिन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा उपभोक्ता संरुषण ऐन, २०५४ विधिक अपकृत्यको उत्कृष्ट उदाहरणको रूपमा प्रसतुत गर्न सकिन्छ । अपकृत्य विधिको सामान्य सिद्धान्तको आधारमा कारवही चली न्याय निरोपण भएको उदाहरण लेखकले फेला पार्न सकेका छैन ।
नेपालका क्षतिपूर्तिको लागि कारवाही चलेका मुद्दाहरूलाई नियाल्ने हो भने पनि अपकृत्यको अवधारणा वमोजिम दायर गरिएको नभनेर कानुनले कारवाहीको अनुमति दिएको भन्ने आधारमा मात्र मुद्दा दायर भएको पाइन्छ । त्यस आधारमा हेर्दा नेपालको हकमा जहाँ उपचार छ त्यहाँ अधिकार छ भनेर भन्नै पर्ने अवस्था रहेको छ । यो मान्यतालाई परिवर्तन गरेर अधिकार हुनासाथ उपचार अन्तर्निहित छ भनेर कारवाही चलाई उपचार खोज्नु पर्छ । वास्तवमा भन्नु पर्दा अपकृत्यमा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी प्रावधान जहिले पनि अनिर्धारित क्षतिपूर्ति (un liquidated damages)को सिद्धान्तबाट प्रेरित हुन्छ । यदि निर्धारित क्षतिपूर्ति (un liquidated damages) भयो भने त्यसले अपकृत्यको चरित्र गुमाउँछ ।
अपकृत्य र अपराधमा अन्तर[सम्पादन गर्ने]
अपराधमा राज्यद्वारा कारवाही चलाईन्छ । अपकृत्यमा पीडित पक्ष आफैंले कारवाही चलाउनु पर्ने हुन्छ ।
अपराध फौजदारी अदालतमा कारवाही चल्छ, अपकृत्य देवानी अदालतमा कारवाही चल्छ ।
अपराधले सामाजिक हकाधिकारमा असर पारेको हुन्छ, अपकृत्यले व्यक्तिगत हकाधिकारमा प्रत्यक्ष असर पारेको हुन्छ ।
अपराधमा राज्यद्वारा दण्ड सजाय दिईन्छ, अपकृत्यमा पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाईन्छ । क्षतिपूर्ति नै अपकृत्यको मूल आधारशिला हो ।
अपराध र अपकृत्यमा फरक हुँदा हुँदै पनि आजभोलि धेरै जसो फौजदारी अपराधहरूलाई पनि उही नाम र तत्वबाट अपकृत्यको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । जहाँ मनसाय खोल्नु पर्ने प्रकृतिका अपकृत्यहरू छन, त्यसमा यस्तो अवस्था आई परेको छ । जस्तैः मानहानी, षडयन्त्र, छल, धोका, अपचलन, कुटपिट, आक्रषण, द्वेषपूर्ण अभियोजन, मिथ्या कथन, उपताप÷विज्याई, अतिचार ÷अनधिकृत प्रवेश, मिथ्या कारावास (वेरितसँग थुन्ने) आदि ।
क्षतिपूर्ति र अपकृत्‍य[सम्पादन गर्ने]
यदि प्रतिवादीको दोषपूर्ण कृत्यको कारण वादीलाई कुनै हानी नोक्सानी हुन गएको भन्ने प्रमाणित हुन्छ भने अदालतद्वारा वादीलाई धनीय रूपमा प्रतिकर दिलाउँछ । प्रतिवादीबाट दोषपूर्ण कृत्य भएको भन्ने प्रमाणित हुनासाथ वादीले क्षतिपूर्ति पाउँछ । यद्यपि त्यो क्षतिको अङ्क नाम मात्रको किन नहोस । अपकृत्यको विषयमा वादीलाई विशेष क्षति भएको भन्ने कुरा प्रमाणित गरी रहनु पर्दैन । विधिक क्षति भएको भन्ने प्रमाणित हुनासाथ वादी क्षतिपूर्तिका लागि दावेदार हुन जान्छ । तर कहिलेकाँही विशेष क्षतिको दावी लिइएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा सो क्षति भएको भन्ने प्रमाणित हुनु पर्छ । विशेष क्षति भएको भन्ने दावीमा विशेष क्षति प्रमाणित भएन भने उसले सामान्य क्षति वापतको रकम समेत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । तर सामान्य रूपमा विधिक क्षतिको रूपमा आएको विषयवस्तुमा भने वादीले विशेष क्षतिको रकम पनि प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । अदालतद्वारा क्षतिपूर्ति भराउनु पूर्व देहायका कुराहरूको परीक्षण गर्दछ:
के आरोपित क्षति प्रतिवादीको कार्यबाट नै भएको हो ?
त्यो क्षति दूरवर्ति त छैन ?
क्षतिको लागि द्रव्यीय प्रतिकर÷क्षतिपूर्ति के हुन सक्छ ?
नेपालको अवस्था[सम्पादन गर्ने]
नेपालमा तुङ्ग शमसेर विरुद्ध इण्डियन एयरलाईन्सको मुद्दामा गरिएको फैसलाबाट अपकृत्य विधिको समुचित विकास हुन सकेन र यसको अवधारणलाई स्वीकार गरिएन । तर पनि ऐन कानुनमा भएका कतिपय प्रावधानहरूको समुचित व्याख्या एवं विश्लेषण गर्ने हो अपकृत्य विधिको राम्रो विकास गर्न सकिन्छ । कतिपय विधिवेत्ताहरू नेपालमा अपकृत्य विधि सम्बन्धी कानुन नै छैन भन्ने धारणा राख्दछन । उनीहरूका अनुसार यसको विकासको लागि कानुन बनाउनु पर्छ । तर यथार्थमा भन्नु पर्दा अपकृत्य विधिको लागि कानुन आवश्यक पर्ने हुँदैन । यो कमल ल प्रणालीको एउटा प्रमुख मान्यता र विकसित अवधारणा भएकाले यसको लागि छुट्टै कानुन बनाई रहनु जरुरी हुँदैन । यदि कानुन बनाएर अपकृत्य विधिको संरचना तयार गरियो भने त्यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा अपकृत्य नभनेर विधिक अपकृत्य (Statutory Tort) भनिन्छ । नेपालमा हाल लागू भएको मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६७२ देखि दफा ६८४ सम्म दुष्कृतिका बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रयोगको २ वर्ष हुँदा पनिनेपालमा दुष्कृति कानूनलाई आधार लिएर अदालतहरुमा प्रयाप्त मात्रामा विवादहरू प्रस्तुत भएका छैनन । यसबाट नेपालमा कानुनी रूपमा दुष्कृति विधिको विकास हुन समय लाग्ने देखिन्छ । तर अदालतले चाहेमा आफ्ना फैसलाहरू मार्फत यसलाई तत्कालै लागू गर्न सक्दछ ।
नेपालमा अपकृत्‍य विधिको अध्‍ययन[सम्पादन गर्ने]
अपकृत्‍य विधि नेपालको लागि नया विषय हो। ,नेपालमा यसबारे न्यायाधीश डा. राजेन्द्र कुमार आचार्यले अपकृत्य विधि लागू गराउनमा लागि परेका छन । उनी नेपालका एक मात्र अपकृत्य विधिका विशेषज्ञ हुन । राजेन्‍द्रकुमार आचार्यले यसका विषयमा झन्‍डै दुई सय जति लेखहरू समेत लेखिसकेका छन्।
External links[सम्पादन गर्ने]
Official blog of Rajendra Kumar Acharya
दुष्कृति कानून-डा. राजेन्द्र कुमार आचार्य दोश्रो संष्करण २०७६,ISBN-978-9937-0-3571-2 (साधारण जिल्द) 978-9937-0-3570-5 (कडा जिल्द)
विकिमिडिया कमन्समा अपकृत्य सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=अपकृत्य&oldid=1002251" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १७:३५, ९ मे २०२१ मा परिवर्तन गरिएको थियो।